IIKHAWUNTARI ZEKHITSHI LASEWOOD (UYILO LWEENGCINGA) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iikhawuntari zeKhitshi laseWood (Uyilo lweengcinga)
Iikhawuntari zeKhitshi laseWood (Uyilo lweengcinga)
Imiphezulu yeetafile zekhitshi ezenziwe ngomthi zizisa ubutyebi obucekeceke kuyilo lwakho. Esikhundleni sokuya kwi-granite evivinywayo neyinyani, okanye izinto ezinamabala amaninzi abaninimzi babuyela umva kwizinto zemveli ezinjengokugqitywa kweenkuni. Izinto zokubala iinkuni zinokongezwa kwindawo yakho ephambili ekhitshini okanye zisetyenziselwe nje isiqithi ngeziphumo ezinomtsalane. Apha ngezantsi uyakufumana uluhlu lwezinto zoyilo ekhitshini nezixhobo zokubala zomthi wesiko ngezimvo kunye nokhuthazo.
Ibekwe kanye embindini woyilo olumhlophe kwaphela, isiqithi sekhitshi esikulo mfanekiso ungentla sisebenza njengesandi esimnandi, songeza umbala oshushu kumbala ocacileyo wombala wekhitshi. Isiqithi sijike imilenze kunye nesiseko somthi saseMahogany, sisinika iAntique Ikhitshi laseSpain isitayile jonga. Inendawo ekuthiwa sisiphatho somthi eqinileyo, isebenzisa ingqolowa yobuso beplid cherry, kwaye inikwe ukugqitywa kweoyile ukukhanya ukukhusela. Njengoko iyi-countertop yobuso, ayilunganga ukuyisebenzisa njengebhloko yokusika, kodwa yongeza ubuhle ngakumbi kwisithuba.
Amatye endalo, intsimbi engenasici kunye nomphezulu oqinileyo zezinye zezona zinto zixhaphakileyo ezisetyenziselwa imiphezulu yeetafile yekhitshi kwaye ziyathandwa ngokuzinza kwazo kunye nokugcinwa kwazo kulula. Nangona kunjalo, iinkuni zinokusetyenziswa njengemiphezulu yeetafile yekhitshi, kwaye unokongeza ukujonga okwahlukileyo kwaye uzive ekhitshini lakho. Ngokungafaniyo nezinye izinto, imiphezulu yeetafile yomthi inika imfudumalo kunye nembonakalo yendalo. Kukwakho neentlobo ngeentlobo zeenkuni, iintlobo, amabala, iinkuni eziziinkozo, uburhabaxa kunye nokugqitywa ukukhetha kuzo, ukuze ube nakho ukufikelela nakuphi na ukubonakala.
Eyona Wood ilungileyo kwiitafile zekhitshi
Ukunyamekela njani ii-countertops ze-Wood
Iingcamango ze-Wood Countertop
Amakhitshi amhlophe aneeNqamlezo zomthi
Xa kuziwa ekukhetheni i-countertop efanelekileyo yeenkuni ekhitshini lakho, eyona nto ibaluleke kakhulu ukuba uyiqwalasele iya kuba ngumsebenzi wayo kuyilo lwakho. Ngaba uza kuyisebenzisa njengomphezulu womsebenzi (apho usika ukutya, utya ukutya njlnjl.)? Okanye ngaba iya kuba yinto engaphezulu kwekhitshi lakho? Cinga ngale mibuzo xa usenza isigqibo sokuba loluphi uhlobo lweplathi oyisebenzisa.
Kukho iitoni zeentlobo zeenkuni kunye nokudityaniswa kwamabala, ukugqitywa kunye nemibala onokukhetha kuyo. Kodwa nazi ezinye zeenkuni ezithandwa kakhulu ezisetyenziselwa ukuphikisana.
Imephu - umbala okhanyayo / okhanyayo ngokwesiqhelo ngeenkozo ezichanekileyo. Bahlala bethandwa ngenxa yokuqina kwayo kunye nokumelana ne-abrasion.Eyona nto ibalaseleyo yokusebenzisa njengebhlokhi yenyama okanye indawo yokusika.
Teak - lo mthi uyazi ngombala osisityebi ofudumeleyo weorenji, uwunika ukujonga okungaqhelekanga. Ngaphandle kokuhlala kwayo ixesha elide, ikwanomxholo weoyile ophezulu, okwenza ukuba kuthintele ukufuma.
Tigerwood - Yazi ingqolowa yayo enemigca enemigca kwaye ihlala ixesha elide, iyenza ibe sisixhobo esifanelekileyo esiza kukugcina iminyaka.
Walnut - lo mthi uyaziwa ngobungqongqo bawo kunye nemibala eyahlukeneyo eyahlukeneyo (kuxhomekeke kweliphi icandelo lomthi olufumanayo). Bona eyethu imiphezulu yeetafile Anut ikhitshi igalari apha.
Itsheri - ihlala isetyenziswa kwifenitshala, iCherry iyathandwa ngenxa yokumpuluswa kwayo, nokuba igqityiwe kunye nombala wayo obomvu.
Zebrawood -Lomthi uyaziwa ngemigca / iipateni ezibetha ngokukhumbuza amagama ayo. Ngaphandle kwesibheno esingaqhelekanga esinikezayo, iZebrawood ikwaziwa ukuba yomelele kakhulu.
Uqalo -Ukuphinda uhlaziyeke ngokukhawuleza, lo mbandela lukhetho olunobuhlobo kakhulu. I-bamboo yaziwa ngokuba yomelele kakhulu, kwaye inika isibheno esicocekileyo, sanamhlanje kunye neepateni zayo ezifihlakeleyo kunye nombala okhanyayo. Kuyathakazelisa ukuqaphela oko imiphezulu yeetafile bamboo ezingezizo ezomthi kodwa yingca, zomelele kunezona ntlobo zininzi zemithi eqinileyo.
Amaplanga afunwayo - ezi ziphinde zafunyanwa ngamaqhina abonakalayo kunye nokuthungwa okunika indawo erustic kwaye ilizwe likhangele ekhitshini lakho, kodwa zihlala zithambile kunezinye iintlobo, ke zisetyenziswa njengee-aksenti kuphela.
Wengue -Enye into eqinileyo yomthi oqinileyo, wengue ifunelwa umbala wayo omnyama ngokwendalo kunye nokucoceka okuthe tye, okuthe tye.
Beech - uhlobo oluthile lomthi olufikelelekayo olomeleleyo nolomeleleyo. Inombala o-orenji okhanyayo / opinki kwaye ithatha amabala emithi kakuhle.
Ukunyusa - le yeyona ntlobo yomthi yomeleleyo yaseMelika, ke ukuyisebenzisa kwi-countertop yakho kunokuqinisekisa ukuba uhlala usebenza ixesha elide.
Mahogany - zininzi iintlobo ezahlukeneyo zeMahogany, kodwa ziyaziwa ngombala obomvu kunye neenkozo zeenkuni ezintle. Lo ngumthi othambileyo, ke awacetyiswa njengeebhloko zokusika
Ngaphandle kweentlobo ezininzi zeenkuni onokukhetha kuzo, kukwakho nokuqhelaniswa kokutya okuziinkozo okwahlukileyo kunye nokugqiba onokukusebenzisa ngokuxhomekeke kumsebenzi ekujongwe kuwo. Ukukhetha indibaniselwano elungileyo yeplanga + yokuqhelaniswa nokutya okuziinkozo + kuya kuqinisekisa ukuba ikhawuntari yakho yeenkuni ihlala ixesha elide. Ngalo lonke ixesha khumbula ukuba ngenxa yendalo yomthi, inokuba sesichengeni somonakalo wamanzi ukuba awuzange ugqoke ngokwaneleyo ukhuseleko (ukugqitywa okwethutyana okanye okusisigxina). Kananjalo, ukhathalelo olufanelekileyo kunye nokugcinwa kufuneka kugcinwe xa usebenzisa iitafile zokhuni ekhitshini lakho.
Ukugqitywa okwahlukileyo kufuna ulondolozo olwahlukileyo, ke kubalulekile ukuba wazi ukuba loluphi uhlobo lokugqibela olusetyenzisiweyo kwi-countertop yakho ukumisela isidingo sayo sokuphinda kulungiswe kwakhona kunye nezinto ezifanelekileyo zokucoca ezifanelekileyo.
I-Waterlox Gqiba-oku kukungangeni manzi, ubushushu kunye nesiphelo esinganyangekiyo. Oku kugqitywa kucocwa ngokulula ngesepha encinci kunye namanzi, kwaye kunokukhutshwa iintsholongwane ngesisombululo seviniga esibuthathaka. Imikrwelo kunye neepiki ezincinci zinokulungiswa ngokufaka isanti kancinane kuloo ndawo kwaye uphinde ufake isicelo seWaterlox.
YIPHEPHE: I-Bleach kunye ne-ammonia, ngqo ubushushu obugqithisileyo, ukubanda okanye ukufuma, ukusika ngqo kumphezulu wayo
Ukubhola kunye nokusika i-countertop kuya kufuna ukucocwa kuyo yonke indawo ebonakalayo
I-oyile ye-Tung / i-Citrus Finish- esi sisiphelo samanzi namachaphaza afuna ukuphinda asetyenziswe rhoqo kwiinyanga ezi-3 ukuya kwezi-6. Oku kucocwa kusetyenziswa isepha encinci kunye namanzi kwaye kungacocwa iintsholongwane ngesisombululo samanzi kunye neviniga, uqiniseke ukuba icinyiwe kakuhle emva kokucoca.
YIPHEPHE: iikhemikhali okanye iisepha ezibukhali, ngqo ubushushu obugqithisileyo, ukubanda okanye ukufuma, ukusika ngqo kumphezulu wayo
Ukujonga ukuba ukugqiba kusalungile, vele uqhube amaconsi amanzi phezulu. Ukuba ubuhlalu bayo buphezulu, ukugqitywa kuselungile, kodwa ukuba iyabamba, sele ifuna ukufaka isicelo kwakhona
Ngononophelo olufanelekileyo kunye nokukhethwa, i-countertop yeplanga ayinakongeza kuphela ixabiso elongezelelekileyo lobugcisa ekhitshini, kodwa ikwanokunika ukusebenza kunye nesitayile.
Iindleko yenye inkxalabo xa kuthathelwa ingqalelo ukufakwa kweetheyiti zekhitshi zokhuni. Ngokwale nto yokubhala imiphezulu yeetafile yeendleko kwi-avareji ejikeleze i-40 yeedola kwisikwere ngo-2018 ngezixhobo ezisisiseko. Nangona kunjalo, iindleko zofakelo zinokunyusa iindleko eziqhelekileyo ukuya kuthi ga kwi-75 yeedola. Uhlobo lomthi owukhethileyo luya kuba nefuthe kumanani eendleko. Umzekelo, izinto zemithi zendalo ezinje ngemephu okanye imnatha ziyabiza kancinci xa kuthelekiswa nezinye iinkuni ezomeleleyo ezifana neteak okanye iintlobo ezininzi zetsheri. Kuyinyani ukuba iinkuni zesiko ezijikelezayo kunye / okanye iinkuni ezixineneyo zihlala zibiza kakhulu ukuthenga.
Apha ngezantsi kunemizekelo embalwa yeetafile zekhitshi ezenziwe ngomthi.
Ikhitshi elincinci eliphakathi kwinkulungwane yamashumi amabini anesikimu sombala esilula kakhulu. Zonke iikhabhathi zipeyintwe mhlophe, ziyenza ivele kumgangatho omnyama wecolate chocolate, kwaye yonke imiphezulu isebenzisa i-sidegrain maple countertop, yongeza ukubamba kombala ofudumeleyo kwisithuba. Isiqithi sasekhitshini sisebenzisa ngakumbi ibhloko eqinileyo yomthi kwindawo esithenga kuyo ukwenza indawo yokusika eqinileyo.
Eli khitshi linokuba lincinci, kodwa linezimvo ezintsha kakhulu ezihlanganiswe kumxholo wonke. Ikhitshi lisebenzisa iikhabhathi zemodyuli- iikhabhathi ezimhlophe ezidityaniswe neapile eluhlaza-elaminethiweyo ngaphezulu kweekhabhathi ezineengcango zeglasi zetiyamu. Zonke izinto zokubala zisebenzisa i-Hickory eqinileyo ngocingo oluhle lokugqitywa kwendalo. Ikhitshi nayo inesiqithi esincinci esimahhala sasekhitshi esinomdla kakhulu ngaphambili. Endaweni yokusebenzisa ukugqitywa kwe-laminate efanayo nayo yonke ikhabhathi esisiseko, ibhodi engaphambili inepeyinti yebhodi ebhodini, ukuyenza ibe yindawo esebenzayo.
Eli khitshi ngokuqinisekileyo liyikhitshi eliphuphileyo. Idibanisa ubukhaphukhaphu kunye nokulula koyilo lwangoku lwekhitshi kunye nochukumiso olufudumeleyo oludibeneyo lokugqitywa kweenkuni. Zonke iikhabhathi zimodareyitha, uninzi lwazo lwalunamathiselwe kumbala ongwevu ongumpu, ngelixa ezinye zisebenzisa ii-veneers zomthi weTeak kuluhlu lweenkozo zomthi, zenza iipateni ezinomdla kakhulu kunye nokudala inkohliso yokuthamba ngakumbi. Ikhitshi elikhulu lineziqithi ezi-2 zasekhitshini, isiqithi sebha yekhitshi sisebenzisa isilayidi esityebileyo seTeak esiqinileyo kwitafile yaso yokufanisa izinto ezenziwe ngomthi. Ngokuqinisekileyo iinkuni ziyayithomalalisa inkangeleko iyonke, zenza ukuba indawo ibonakale inomtsalane kwaye ibe yeyasekhaya.
Ikona elincinci lekhitshi eliqhayisa ngesitayile kunye nokusebenza. Incinci ikhitshi elisingasiqithi Uyilo lwalucwangciswe ngokufanelekileyo ngebha yesidlo sakusasa kunye ne-countertop ukwenza indawo esebenzayo. Uninzi lweekhabhathi zisebenzisa ii-laminates ezimhlophe ezimhlophe ukufanisa kunye nokugqitywa okumhlophe okumhlophe kwendlu, kodwa kuyongeza ukugcwala kwamanqwanqwa kunye neeshelfu zecaleilever ezenziwe ngomthi womthi woqalo. Oku kongeza ukubamba okuhle kobushushu kuloo ndawo, ngelixa unikezela ngenkangeleko entle kunye nesibonelelo esongeziweyo sokuba yinto efanelekileyo ye-eco.
Ukusetyenziswa kwe-walnut kule khitshi yanamhlanje yongeza isibheno esihle kwisithuba, ngelixa ugcina ukubukeka kwalamaxesha. Umbala ofudumeleyo weenkuni ugcwalisa i-countertop yomphezulu omnyama kunye nezixhobo, kwaye unceda ukunika indawo indawo efudumeleyo, ngakumbi ekhaya. Itafile encinci yebar yokwahlula ikhitshi kuyo yonke indlu kwaye isebenzisa i-walnut eqinileyo kwicala layo nakwikhawuntari yayo. Kugqityiwe ngeWaterlox ukuyikhusela ekuchithekeni nakumswakama.
Inomfanekiso wobume obunamandla, eli khitshi longeza ukubonwa kwelizwe elixhomileyo kweli khaya langoku, ngelixa ligcina iskim semibala esincinci sendlu. Ikhitshi libonisa lonke udonga olumhlophe olubhangqwe ngemabula emhlophe emhlophe, kunye neekhabhathi zekhitshi ezipeyintwe ngombala ofudumeleyo ofudumeleyo. Ukuyinika imvakalelo engaphezulu, isebenzisa iinkuni eziqinileyo kuzo zonke ii-coutnertops zayo, ezikunceda ukongeza ithoni eshushu kwindawo. Isebenzisa i-maple eqinileyo kunye ne-waterlox ukuze ihlale ikhuselekile emanzini nakumswakama.
Esi siqithi sincinci sekhitshi esine-mahogany eqinileyo sinceda ekuphuculeni nasekugqibeleleni ukubonwa kwesitayile selizwe esifuna ukufezekisa eli khitshi lanamhlanje. Iikhabhathi ezihonjisiweyo zipeyintwe ngombala we-mint okhanyayo wokujonga okuhlaziyayo, ngelixa indawo yokupheka yayinxitywe ngezitena zeterracotta ukongeza ukuthungwa kunye nokugxininisa ngakumbi ukujongwa kwendawo yendawo. Ngee-accents, uya kubona ukusetyenziswa kwemipu eyenziwe ngomthi eluphahleni, kunye nezihlalo zamalaphu ezi-checkered zezitulo.
Le khitshi inembonakalo yesitayile esiveleleyo, ikakhulu ngenxa yokusebenzisa kwayo iPine iinkuni phantsi, iingcango kunye neefestile kunye nakwiibhodi zesilingi. Amaqhina amnyama awaziwayo omthi awongeza ubuntu ngakumbi kwisithuba kwaye asinike isibheno sendalo ngakumbi. Iikhabhathi zekhitshi zisebenzisa indibaniselwano yesiseko sePearwood yendalo kunye nesiseko esipeyintwe ngesininzi kwisiqithi sasekhitshini. Isisiqithi esikhulu sekhitshi ngokuqinisekileyo sime ngokugqwesileyo ngenxa yesiseko sayo sekhabhathi esenziwe nge-mint kunye nePine countertop eqinileyo njengoko ithelekiswa nokugqitywa komgangatho kunye nokuma kakuhle.
Iintlungu eziluhlaza ezilumkileyo lukhetho oluthandwayo kwipeyinti yekhabinethi xa kufikwa ekufezekiseni ilizwe okanye ikhitshi yesitayile se-rustic. Lo ngumzekelo omhle, njengoko zonke iikhabhathi zipeyintwe eluhlaza okomhlaza. Ukuqhubela phambili ukuphucula isibheno se-rustic sendawo yekhitshi engaqhelekanga, iithayile zeterracotta zazisetyenziselwa ukutyibilika, kunye nesiqithi sekhitshi esime simahla sasibekwe embindini. Esi siqithi sasekhitshini senziwe ngeMahogany eqinileyo, kwaye sigcina i-rustic, isiphelo esidala. Le tafile isebenza ngakumbi njengendawo yokulungiselela eyongezelelweyo, kwaye ngekhe kulunge ukuyivelisa ukufuma okuninzi.
Indawo encinci yokupakisha ikhitshi kubuntu njengoko idibanisa ngenkalipho imibala kunye nezinto ezifezekisiweyo ukufezekisa eli khitshi lanamhlanje ngokuthinta i-rustic. Uya kubona ukuba zonke iikhabhathi zimodareyitha kwaye zinokugqitywa okumhlophe kwe-matte kunye noyilo lwepaneli ukuyinika isibheno sokuvuna ngakumbi. Endaweni yokusebenzisa iithayile zekheram okanye iglasi, isebenzisa izitena ezimhlophe-zipeyintwe kwi-backsplash yokongeza uburhabaxa kumphezulu, ngelixa i-countertop isebenzisa umthi oqinileyo wemephu ene-waterlox yokugalela ukongeza ithoni e-orenji ethandekayo kwisikimu esimnyama esimhlophe izinto zangaphakathi.
Umgangatho omncinci, onomda owenza ukuba ezi khitshi zivulekileyo zifaneleke njengoko ungadingi ukuba ubekele indawo ujingi emnyango. Le khitshi inelizwe laseFrance elijonge kuyo. Isebenzisa isidumbu sekhabhathi esimhlophe esimhlophe esineeplanga zemithi ethe nkqo njengokuxhaswa kweeyunithi zeekhitshi. Kwitafile yempahla, iye iye kwimithi yemephu eqinileyo ethe chatha ukuyinika ithoni etyheli ekhanyayo ekhangeleka intle ngeenkcukacha zaseFrance kwiikhabhathi.
Eli khitshi ngomnye umzekelo obalaseleyo woyilo lwe-rustic oludibanisa izinto zeklasi zerustic kunye ne-aesthetics yanamhlanje kunye neendlela zokugqiba. Zonke iikhabhathi ezikule khitshi zimhlophe kwaye zineprofayile elula yokuhombisa ukuze inike imvakalelo yanamhlanje, kodwa isenokubonakala kweediliya. Ukuyinika irustic touch, uya kubona ukusetyenziswa kwemithi eqinileyo yetiak kwesi siqithi sayo sisekude kakhulu sasekhitshini. Isebenzisa amaplanga ashinyeneyo omthi we-teak ancanyathiselwe ecaleni ngapha nangapha, igcinwe isanti encinci ukubonisa ukutya okuziinkozo kwendalo kunye nokwakheka kweenkuni. Le tafile isebenza ikakhulu njengendawo yokulungiselela eyongezelelweyo kwaye ingakumbi kwicala lokuhombisa, njengoko olu seto lwe-countertop alunakulunga ukuba lusetyenziswe njengebhlokhi yokusika kwaye alunakuphalazeka kuyo kuba iinkuni ziya kuyifunxa ngokulula. Kusenjalo, nangona kunjalo, kunika i-countertop eqinile kakhulu eya kukuhlala iminyaka.
Uninzi lwemizekelo edlulileyo ibonakalise iikhitshi ezingaqhelekanga kunye nezirustic, kodwa lo mzekelo ubonakalisa ikhitshi entle yaseYurophu enekhabhathi ezimnyama zaseMahogany ezifakwe ioyile kukufezeka kwaye zenziwe ngeemabula ezimhlophe ukuze zive kamnandi. Inesiqithi esikhulu sekhitshi esine-sage eluhlaza-epeyintiweyo nesiseko esijongela phantsi ukubonakala okusesikweni kwekhitshi kwaye siyinika indawo ekhululekileyo. Isiqithi sasekhitshini sisebenzisa isitopu somthi esiqinileyo seTeak, sisongwe ngokucocekileyo kwaye sigutyungelwe ngeoyile ye-tung ukuyikhusela kubumanzi nakwezinye izinto, isenza somelele kwaye somelele.
Eli khitshi lanamhlanje linomtsalane okhululekileyo kunye nokungaqhelekanga. Inemigangatho yeplanga ekhanyayo yobunjineli, eyenza isiseko sokukhanya nesifudumeleyo. Iikhabhathi zasekhitshini zonke zimhlophe kwaye zisebenzisa ukutsalwa okumnyama okuyinika ukubonakala kweediliya ngakumbi. Kwisiqithi sayo sasekhitshini, umthi weTiak oqinileyo yayiyinto yokuzikhethela, eyinika ukhululeke ngakumbi.
Eli khaya lihombisayo laseYurophu ngokuqinisekileyo aloyiki ukudibanisa ukugqitywa kweenkuni ezahlukeneyo kunye nemibala. Ngelixa izinto zangaphakathi ngokubanzi zisebenzisa ukukhanya, umbala ongathathi hlangothi owenziwe ikakhulu zi-taupes, grays kunye nabamhlophe, ikhitshi longeza into enomdla kuyo ngokongeza isiqithi sekhitshi somthi. Umgangatho wendawo ngelixa u-mahogany uqinile, unika isiseko esishushu kakhulu nesibukeka sihle ngaphakathi. Isiqithi sasekhitshini sisebenzisa isiseko se-oki esidala esineenkcukacha ezomeleleyo ze-neo-classic kunye netafile yeplanga ye-teak etyebileyo, eyenza indawo eqaqambileyo ebonakalayo ngokucacileyo kwiphalethi engathathi hlangothi yangaphakathi.
Uyilo lwangoku lwekhitshi olusebenzisa iikhabhathi zasekhitshini ezigqityiweyo ezingwevu ezinompu zinika ikhitshi lazo ngokudibanisa izinto ezahlukeneyo kwisitayile. Inetayile ye-chevron backsplash eyahlukileyo enemigca eluhlaza okwesibhakabhaka nephuzi, yenza ipateni emnandi kakhulu kunye neyala maxesha. Kwisiqithi sayo esimise okwekhitshi esimile njengo-U, sisebenzisa itafile yomthi we-teak eqinileyo, ibeka isikhombisi se-diagonally ukuyinika isibheno esinamandla esifana neetayile zangasemva. Iphantsi lendalo le-orenji lomthi we teak likwahambelana neorenji kwi-backsplash ngokunjalo nakwisibane.
Imiphezulu yeetafile yeenkuni zihlala zongeza ukuziva ubekekile ekhitshini, kodwa lo mzekelo unika isiphumo esichaseneyo, njengoko isongeza ubuhle kolu loyilo lwekhitshi. Iipowder zeblue iikhabhathi zasekhitshini zikhangeleka zihlaziya kakhulu kwaye zinika le khitshi i-vibe yolutsha kakhulu. I-countertop eqinileyo yasekhitshini yesiqithi saseMelika eyayisisanti kwaye ipolishiwe kwimfezeko yongeza into esesikweni kunye nenhle kakhulu kwisithuba, kodwa ayikoyisi okunye ukukhanya okugqityiweyo ekhitshini.
Le khitshi entle yanamhlanje idibanisa izinto zerustic kunye nolwakhiwo lwangoku kunye neendlela zokugqiba. Iikhabhathi zasekhitshini zisebenzisa iinkuni ze-oki ze-rustic ezinamaqhina avelele kolo jongano luluhle kakhulu. Kodwa, zilungiswe kakuhle, zenza ukuba umphezulu ogudileyo nobengezelayo uqheleke ngakumbi kwiikhitshi zangoku. I-countertop yale khitshi ihluke kakhulu njengoko idibanisa i-travertine kunye neenkuni eziqinileyo, ukudala ukwahlula okuqinileyo phakathi kwezi zixhobo zombini, ezenza ukungafani okumangalisayo. Ithoni eluhlaza emerald eluhlaza wecomputer ye-travertine iyancedisa i-countertop ye-oki yendalo egudileyo.
Amakhitshi amhlophe anee-Countertops zeWood
Iikhabhathi ezimhlophe zidibene kakuhle nezixhobo zokubala zokhuni. Apha ngezantsi uyakufumana uluhlu lweoyilo lwektichen ukukunika imibono yendawo yakho.
Ikhitshi yesitayile seediliya esinomxube we-eclectic wefanitshala kunye nezinto zoncedo ezinika ubuntu obuninzi kunye nokuziva uhlala ngaphakathi. Iikhabhathi zasekhitshini zinepeyinti emhlophe egugileyo, nto leyo eyinika inkangeleko yeekhabhathi ezigugileyo. Izinto zokubala zekhitshi ezisetyenzisiweyo yimephu eqinileyo yethoni etyheli ekhanyayo egcwalisa isandi esiphantsi esi-orenji samacango e-chestnut kunye neefestile.
Le khitshi yesitayile ekhangeleka inomtsalane kunye neekhabhathi zayo ezimhlophe ezinee-countertops ze-oki ezahlukileyo. Uyilo lubonelela ngohlobo lwelizwe olwahlukileyo kunye neekhabhathi zaso zewadibhodi kunye nokugcina ishelfu evulekileyo kunye nesinki enkulu yokuntywila indlu yokufama.
Omnye umzekelo omkhulu wasekhitshini yesiko lesiqhelo, eli khitshi lineekhabhinikhi zesitayile saseFrance ezipeyintwe ngombala omhlophe ukuze zivakale ngakumbi. Isiseko esimhlophe sikwabonakala kumgangatho we-redwood kwaye ugcwalisa iithayile zodonga eludongeni kunye nelitye lekalika elibuyela umva. Inesiqithi esikhulu sekhitshi esomeleleyo setafile yaseMahogany. Ukuyinika ukujonga okungaphezulu, ukubukeka kweediliya, amaqhina endalo kunye nemingxunya yeenkuni azange zigcwaliswe, kunye nobume bendalo babugcinwa. Umphezulu unikwa ukukhanya kweoyile ye-tungsten ukuyikhusela ekufuma nasekubeleni.
Isithuba sekhitshi esimnandi esiphefumlelweyo esine-scheme esimnandi ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe. Umgangatho wokhuni oluqinileyo wawuzotywe ngaphezulu ukwenza iipateni zesikwere ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe, ukuthelekisa amalaphu asetyenziswa kwimiqamelo nakwiziqwenga zefanitshala. Isiqithi esikhulu sekhitshi simi kumgangatho oluhlaza okwesibhakabhaka njengoko sinesiseko esimhlophe esimhlophe kunye necomputer entle yomthi weCherry, esongeza umbala ombala ofudumeleyo kwindawo.
Eli khitshi lincinci livakalelwa ngokungaqhelekanga. Inkangeleko eyenzileyo iya kujongeka intle kwindawo yenkulungwane yenkulungwane, kwaye nangaphakathi isitayile sangaphakathi njengoko sidibanisa izinto zangoku kunye nezakudala kuyilo. Iikhabhathi ezimhlophe ezingafakwanga mhlophe zidityaniswe nesleyiti engwevu ye-ceramic tile backsplash, ngelixa i-countertop isetyenziselwa i-walnut eqinileyo ukuthelekisa izakhelo zeengcango kunye neefestile.
Imiphezulu yeetafile yekhitshi yomthi ibonakala intle kule khitshi yanamhlanje yenkulungwane ephefumlelweyo. Isithuba sibonisa imibala emhlophe emhlophe emhlophe yeklasi yasekhitshini yenkulungwane, kwaye ifake umbala wombala ofudumeleyo ngokugqitywa kweenkuni zendalo. Kule meko, into yeplanga iya kuba yikhawuntara, esebenzisa i-oki yendalo eqinileyo. Isitayile esimhlophe esimhlophe sangaphantsi komhlaba, ishelufu evulekileyo, ipadibhodi yokuhombisa, kunye nezixhobo ezimnyama zentsimbi zizisa uyilo kunye neziphumo ezinomtsalane.
iilokhwe zomtshato zelavenda ziyathengiswa
Indawo efanelekileyo yokuprinta izimemo zomtshato
ilokhwe yomtshakazi emnyama enemikhono
izipho zothando kuye ngomhla wokuzalwa kwakhe